Dawlad Deegaanka DDS Oo Laydh La’aan Ba’an Soo Food-saartay Iyo Shacabka Oo Cabasho Ka Muujiyey - Jigjiga Online
HomeArimaha BulshadaDawlad Deegaanka DDS Oo Laydh La’aan Ba’an Soo Food-saartay Iyo Shacabka Oo Cabasho Ka Muujiyey
Dawlad Deegaanka DDS Oo Laydh La’aan Ba’an Soo Food-saartay Iyo Shacabka Oo Cabasho Ka Muujiyey
Jigjiga (JigjigaOnline) – Shacabka dawladda deegaanka ayaa la dhibaatoonaya laydh la’aan ba’an, waxaana inta badan gobollada iyo magaalooyinka waaweyn ka maqan korontada.
Ma jiro wax war ah oo kasoo baxay maamulka dawladda deegaanka iyo hay’adda Korontada Itoobiya midna, hase yeeshee waxa maalin walba saacadaha ugu badan madow guryaha, meherada iyo shaaracyada, taas oo ganacsiyo badan ku qasabtay inay albaabada xidhaan waqtiyada uu laydku maqan yahay.
Shabakadda wararka ee JigjigaOnline oo isku dayday inay xidhiidho hay’adda korontada ayaanay u suurtogelin, hase yeeshee shacabka ayaa cabasho ba’an ka muujiyey arrintan.
“Hooyo, waxaan haystaa meheraddaas. Waxa lagu jiraa waqti Ramadaan ah, waxaan ku qasbanaaday in meheradda aan toosh ku iftiinsado waqtiyada habeenkii, waanad ogtihiin in aan toosh lagu ganacsan karin. Ma jirto cid ka hadasha, mana garanayno saacadda uu soo dhacayo laydhku iyo waqtiga uu bakhtiyayo.” Sidaas waxa tidhi Hooyo Caasha Muxumed oo meherad ku haysata magaalada Jigjiga.
Hooyo Caasha waxay tilmaantay in bilihii ugu dambeeyey aanay dhawr maalmood oo xidhiidh ah helin laydh, taasina ay saamaynta ugu badan ku yeelatay danyarta.
Mid ka mid ah ardayda wax ka barata magaalada Jigjiga ee xarunta maamulka deegaanka, oo magaciisa ku sheegay Yuusuf Aadan ayaa waxa uu isaguna sheegay in ardayda dawladda deegaanka ay la dhibaatoonayaan laydh la’aanta oo ay waxbarashadoodii hoos u dhacday, maadaama aanay habeenkii wax-akhrisan karin, sidoo kalena ay ka baaqato waxbarashadii dheeraadka ahayd ee waqtiyada habeenkii ay sida gaarka ah u raadsan jireen.
“Adeer, dee waadigaa arkaya. Ma hubo in caawa uu laydh soo dhici doono, eeggana wuu damsan yahay. Waxa suurtogal ah inaan tago isaga oo shidan amaba uu sidaa ku maqnaado. Waxba ma akhrisanin dhawrkii habeen ee ugu dambeeyey, barayfatkiina ma tegin oo waa madow.”
Shacabka danyarta ah, waxa ay dareensan yihiin in ganacsiyada waaweyn ay haystaan mishiino laydh oo ay shitaan waqtiyada uu laydhku bakhtiisan yahay, laakiin ay si gaar ah u taabanayso ganacsiyada yaryar ee ay ka adeegtaan inta badan dadka danyarta ah.
“Wali maan arag iyadoo madaxweynaha amaba masuul kale ka hadlayo laydh la’aanta. Waayo? Iyaga mishiino ayaa u baxa laakiin anaga guryuhu way nagu madow yihiin.” Sidaa waxa yidhi Maxamed Cumar Daahir oo ku nool magaalada Jigjiga.
Si kastaba ha ahaatee, maamulka Dawladda Deegaanka DDS ayaa waxa looga fadhiyaa inay qaataan tallaabooyin ay adeeg koronto ku siinayaan shacabka waqtiyada uu maqan yahay laydhku.
CADAABTII Cabdi Ilay: Waayihii Xabsiga Xaqdarrada Ee Cabdi Shafeec Iyo Mid Ka Mid Ah Dhibaatooyinkii Cabdi Ilay U Geystay Shacabka DDS